Maxkamadda sare ee Kenya oo go’aamisay in berrito dhacdo doorashada | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxkamadda sare ee Kenya oo go’aamisay in berrito dhacdo doorashada
Maxkamadda sare ee Kenya oo go’aamisay in berrito dhacdo doorashada
Maxkamadda sare ee Dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday in maalinta berri ah ay doorashada madaxtnimada dhici doonto iyada oo aan cidna laga dhegeysan karin codsiyada la xiriira dib u dhigga doorashada.
Maxkamadda ayaa sheegtay in 3 ka mid ah 7 Garsoore ee Maxkamadda ay soo xaadireen kulankii maanta go’aanka lagu gaari laha aiyada oo 4ta kale ay safarro dibadda ah iyo kuwo gudaha dalka ah ku maqanyihiin una saamixin in ay kulanka xaadiraan sidaas darteedna aysan go’aan gaari karin saddex Garsoore iyada oo berritana doorashada waqtigeeda tahay.
Maxkamadda ayaa xalay sheegtay in musharraxa diida doorashada berri aysan ku qasbi doonin in uu ka qeybqaato doorashada islamarkaan haddii go’aanka noqdo in 26ka Bisha ee Berri ah la qabto aysan Maxkamadda hor istaageyn arrintaas.
Hayeeshee waxaaba soo baxday in uusan jirin waqti ay maxkamadda ku dhegeysan karto kiis dacwadeedka ku doodaya in doorashada dib loo dhigo maaddaama ay maanta kaliya ka harsantahay,maantana Garsoorayaashii Maxkamadda xaadiri waayeen intooda badan.
Garsoore Maraga,ayaa sheegay in Kooram la’aan darteed doodda Maxkamadda ee arrintan aysan sii socon karin,isaga oo raalli gelin ka bixiyay in uu kulankaas baaqdo.